A Brand New Indonesia: Shanda Nesimba, Smart & Kurevesa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indonesia Kuputsa Nhau » A Brand New Indonesia: Shanda Nesimba, Smart & Kurevesa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Gurukota rezvekushanya neCreative Economy, Sandiaga Salahuddin Uno, akakurudzira vatambi vezvehupfumi vanogadzira kuti vatarise kune zvinogoneka zvebasa ravo, kuitira kuti vakurumidze kuitika kwekushanya kwemhando yepamusoro. Izvi zvakataurwa naSandiaga paakashanyira "Kriya Kayu Rik Rok" muMagelang, Central Java, Indonesia.
World Tourism Network yakatumidza HE Sandiago Uno gurukota rezvekushanyirwa kwevanhu munyika. Izvi zvakaitika munaKurume 9, 2021.
Musi waMbudzi 21,2021, 4, mushumiri mumwecheteyo akaunza iyo 11 AS musimboti - yake yemashiripiti fomula kuti atore gumi nemumwe vashanyi vakarasika vadzokere kunyika yake.
Gurukota reIndonesia rekushanya vane tarisiro yekuti iyo 4 AS ichave yakakosha kukosha kune yekushanya uye maindasitiri ekugadzira kuvakazve mabhizinesi avo uye kumutsiridza hupfumi hwenyika.
Gurukota reIndonesia rekushanya neCreative Economy riri kushamwaridzana nekuvandudzwa kwekusimba uye kukwikwidza kukurudzira kumutsiridzwa kwemabhizinesi mushure mekurohwa nedenda reCOVID-19.
Kuzadzisa chinangwa, Indonesian Tourism Ministry yakagadzira zvirongwa zvinotarisa pa "4 AS" nheyo: dzinoti Kerja KerAS (kushanda nesimba), CerdAS (smart working), TuntAS (yakakwana), uye IkhlaAS (yakatendeka).
Gurukota Rinonyanya Kushanya Mumagariro anobva kuIndonesia
Aya "4 AS" misimboti yakavambwa zvichitevera COVID-19 denda kukanganisa kune kushanya uye bhizinesi rekugadzira munyika yose, uko kusati kwatemerwa magariro nehupfumi kuyera kupararira kwehutachiona, kwaive nemamiriyoni gumi nematanhatu evashanyi vanosvika muna 16.11 uye vakadonha. 75% kusvika 4.02 miriyoni muna 2020.
Huwandu uhu hwaive hwakaoma kuhupfumi hwekushanya hwakapa 5.7% yechigadzirwa chenyika uye hwakapa mabasa 12.6 miriyoni muna 2019.
“Tinofanirwa kufamba nekukurumidza kuti tiwane ruzivo nehunyanzvi hunoenderana nevemabhizinesi. Ndosaka vese vane chekuita vachifanira kubatana kuti vavhure indasitiri yekushanya nekugadzira mikana yekuumba mabasa uye nekuona kuti tinokwanisa kuvaka hupfumi hwedu kuburikidza nekushanya kwakanaka uye kwakasimba, "akadaro Sandiaga Uno, Gurukota rezvekushanya neCreative Economy.
Kuwedzera kusimba kwebhizinesi kuburikidza nedhijitari bhizimusi rekudzidziswa.
Hurumende yanga ichishanda pachirongwa ichi nekugovera mari dzekudzosera kumaindasitiri ezvekushanya nekugadzira zvinhu.
Kubva muhafu yekutanga ya2020, indasitiri yekushanya muIndonesia yakarasikirwa nemamiriyoni makumi masere nemashanu eIndonesia rupiahs mumari yekushanya, neindasitiri yemahotera neresitorendi inofungidzirwa. kurasikirwa kunosvika 70 bhiriyoni Indonesian rupiahs.
Denda reCCIDID-19 rakanganisa zvakanyanya mamwe matunhu ekugadzira zvakare. Naizvozvo, Ministry iri kushandawo muzvirongwa zvedzidzo zvakasiyana siyana kukurudzira mabhizimusi munyika yose.
Chimwe chezvirongwa chirongwa chevadzidzi vezvikoro zvebhodhingi zvechiIslam chinonzi “Santri Digitalpreneur Indonesia” iyo inotarisa pakudzidzisa uye kudzidzisa “santri” (vadzidzi) kuti vadzidze hunyanzvi hwedhijitari uye nekuashandisa semari yavo kuti vave digitalpreneur kana kushanda muindasitiri yekugadzira.
“Indonesia ine zvikoro zvebhodhingi zvechiIslam zvinosvika 31,385 uye tinovakurudzira vese kuti vasimudzire hupfumi hwavo kuburikidza nedhijitari. Zvirongwa zvese izvi chimwe chekuedza kwedu kusimudzira hupfumi hwenyika,” akawedzera Sandiaga.
Bazi iri rakasimbaradzawo kudyidzana kwaro nevese vane chekuita nekusimudzira hupfumi hwenyika zvichibva pa “3 C principals”, zvinoti Kuzvipira, Kugona, uye Champion, kumutsiridza hupfumi hwekushanyirwa nehunyanzvi, kuwedzera kusimudzira upfumi hwenyika, nekuwanisa vanhu mabasa.
“Tinofanirwa kufamba takabatana pane ese aripo ebhizinesi anogona kugadzira mabasa matsva. Kuburikidza nemazano ehunyanzvi uye ekugadzira, tinokwanisa kuvaka nekusimudzira hupfumi hweIndonesia, "akapedzisa Sandiaga.
Gurukota rezvekushanya kweIndonesia rinotora chikamu muhurukuro yeWTN
Nezve Indonesia Ministry of Tourism uye Creative EconomyRichitungamirirwa nechiono chekuita kuti Indonesia ive nzvimbo yepasirese yekushanya, Bazi reIndonesia reKushanya neCreative Economy rinogadzira mabhindauko akasiyana kuti arambe achikura indasitiri yekugadzira muIndonesia.
Mafashoni emafashoni evakadzi vechiMuslim ari kukura nokukurumidza muIndonesia, pamwe chete nechishuwo chekutaridzika kunofadza ne hijab. Sezvo kudiwa kuri kuramba kuchiwedzera, vagadziri venzvimbo vanoramba vachigadzira zvipfeko zvakasiyana-siyana zvakanaka uye zvakasiyana zvevakadzi vechiMuslim.
Kriya Kayu Rik Rok, iri muMagelang, Central Java, imhando yemuno inogadzira nekugadzira zvigadzirwa zvemaoko zvinogadzirwa nemarara ane hushamwari zvakatenderedza dzimba dzavo. Rik Rok ari kuitawo zvekushanya kwedzidzo yevana vanoda kufamba vachidzidza senge batik, kugadzira potter, kurima uchi, kudzidza gamelan, kutamba, nezvimwe.
Ministry of Tourism uye Creative Economy inova nechokwadi chekuti vatambi veindasitiri yemahotera neresitorendi muIndonesia yose vari kuwedzera kugadzirira kuita CHSE (Kuchena, Hutano, Kuchengetedzeka, uye Kusimukira Kwenzvimbo) -yakavakirwa hutano protocol certification.